अमेरिकामा २ जना नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि ! – Sagarmatha Online News Portal
अमेरिकामा २ जना नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि !
काठमाडौं । अमेरिकाको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र मानिएको न्युयोर्कमा २ जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । ज्याक्सन हाइटमा बस्ने ५० वर्षीय व्यक्तिसहित अर्का ४७ वर्षीय ट्याक्सी चालकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
ज्याक्सन हाइटमा केही वर्षदेखि बस्दै आएका २ सन्तानका पिता एक साताअघि नियमित ज्वरो आउनुका साथै खोकी लागेपछि क्विन्सको एल्महस्ट अस्पताल भर्ना भएका थिए । शंकापछि उनको कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि उनी संक्रमित भएको रिपोर्ट आएको हो ।
परिवारका सदस्यले जनाएअनुसार उनलाई २ दिनदेखि भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । कसैलाई प्रत्यक्ष भेट गर्न नदिए पनि अस्पतालले परिवारलाई भने बिरामीको स्थितिबारे नियमित जानकारी दिइरहेको छ । ४ सदस्यीय उनको परिवारका सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । उक्त रिपोर्ट भने आइसकेको छैन । परिवारका सबै सदस्य अहिले घरमै छन् । संक्रमित युवक पहिलेदेखि नै मधुमेह पीडित थिए ।